Mayelana NATHI | IZigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
IZigong City Xinhua Industrial Co,. Ltd.
I-Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd. yasungulwa ngo-2005 Itholakala eZigong idolobha laseSichuan eSifundazweni saseChina, iZigong ingesinye sezisekelo zokukhiqiza i-carbide Material eChina. I-Xinhua Industrial inkampani egxile ekukhiqizeni izinto ze-carbide namathuluzi okusika i-carbide, i-ZWEIMENTOOL iyinhlangano yethuluzi lokusika ephezulu le-carbide eliphethwe yiZigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Kuklonyeliswe nguhulumeni njengoba zobuchwepheshe emisha thekelisa ukuthekelisa ibhizinisi, Ohola ucwaningo kanye nokuthuthukiswa carbide impahla kanye khabhayithi ahlabayo amathuluzi eChina.
Indawo yethu yefektri engu-25000㎡ futhi inabachwepheshe nabasebenzi abangu-120 sebebonke. ngeminyaka engaphezu kwengu-20 yokuhlangenwe nakho kokukhiqizwa kwe-tungsten carbide namathuluzi wokusika we-carbide.
Sinemigqa yokukhiqiza ekilasini lokuqala kanye nokuphathwa kwekhwalithi.
Qedela umugqa wokukhiqiza kusuka ku-WC powder kuya eMikhiqizweni ye-Carbide eqediwe njengemimese ye-Carbide Woodworking, Carbide Rods, Carbide Rotary Burrs, Carbide Cutting Tools and Circular Slitting Knives njll.
Imikhiqizo engama-70% ithunyelwa emazweni aphesheya kwezimakethe ikakhulukazi imikhiqizo ethuthukile yezimboni.Imikhiqizo yethu iyathandwa ngamakhasimende emhlabeni jikelele ngekhwalithi enhle kakhulu nentengo yokuncintisana.
Sihlala silinda ukuthi: Ikhwalithi umthetho wokuqala wokusinda kwebhizinisi .Inhloso yethu: Ukuze ube ngumakhi wamathuluzi we-carbide ongcono kakhulu nowokusika i-carbide emhlabeni.
Khetha thina, sizoba ngumlingani wakho webhizinisi onokwethenjelwa!